ကြောင်သတင်း အမှောင်ခွင်း Light | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ကြောင်သတင်း အမှောင်ခွင်း Light
ကြောင်သတင်း အမှောင်ခွင်း Light
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Dec 1, 2013 in Aha! Jokes, Satire |5comments
အရက်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများအား ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့မှုများ ရှောင်ရှားရန် သမဒဂျီး ဦးသိန်းစိန် သတိပေး ပေါကျားဆင် မိန်းမမှ ဖုံးဆက်ခေါ်သဖြင့် အစည်းအဝေးခန်းထဲမှ အလျင်အမြန် ပြေးအထွက် တိုင်နှင့်နဖူး ပြေးဆောင့်မိကျောင်း ခါတော်မှီ အသစ်တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်လိုက်သည့် နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းနှင့် နဖူးဆေးရုံ ပြင်ပလူနာမှတ်တမ်းတွင် ဖတ်ရသည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိမ်ရတုခန်းမတွင် ပြုလုပ်သော သမဒဂျီးနှင့် အရက်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ တွေ့ဆုံပွဲအပြီး ညစာစားပွဲ၌ အရက်၊ဘီယာ မတိုက်၊ ဆိုဒါအချိုရည်သာ ပါသည့်အတွက် သူ့ထက်ငါ အလုအယက် ဧည့်ခံပွဲ တက်လာဂျသော မြန်တျန့်ဂေဇက် ဒါဇိမ်ပလက်စ် အရက်ဖက် အဖွဲ့သားများ ပက်လက်လန် ကုန်သည်။
ဆန္ဒပြပွဲတွင် ဘာသာရေး ယုန်ကြည်ချက် စော်ကားမော်ကားသည့် ပိုစတာဆိုင်းဘုတ် အသုံးအနှုန်းများအား အရေးယူတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်တျန့်အစိုးမရမှ ကြေငြာအပြီးတွင် ဆိတ်ထင်မြင်ရာ အဝှာထိုးဓာတ်သော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ သဂျီးခိုမ်အား သဂျီးဂဒေါ်ညိုထက်ကျော်မှ ပါးစပ် ဒက်တိပ်ပိတ်ထားဂျောင်း သာမီးဒေါ်ဂလေးနှင့် ညစဉ် ချက်တင်ကြူနေသူ ဦးကြောင်ကြီး သတင်းပေးပို့သည်။
လက်ပံတောင်း ကြေးနီတောင် နှစ်ပတ်လည် ဆန္ဒပြပွဲတွင် တရုတ်အလံ မီးရှို့ခံရမှုအတွက် ပြန်လက်စားချေရန် မြန်တျန့်ပြည် တရုတ်သံအမတ်ကျီး အီတွန့်ဗွမ်မှ ကူမြူနစ်ကေဒါ သူလျှိုမယ် ပီကင်းဂျက်မ ကြေးမုံဂျီးအား ဆင့်ခေါ်ရာ သာမီးနေ အကောင်းဗူးဟု တက်စ်မက်ဆေ့ခ်ျ ပြန်ပို့ဂျောင်း စီအိုင်အေမှတ်တမ်းတခုတွင် ဆိုသည်။
ဘွားဒေါ်ဂျီးအား မေးငေါ့လျက် ပါရဂူဘွဲ့ကျမ်း အမြန်ပြုရန် ဖိအားပေးနေသော အီးဒုံးဂျီး ဆိတ်ချမ်းသာစေရန် သူ့ကြမ်း မကြာခင် ကျွတ်တော့မည်ဟု နေ့စဉ်မှောက်လျက် ကြမ်းပြု၍ ယိုင်နဲ့နဲ့ ဖြစ်နေသော ကြမ်းခင်းအား ဒေါက်တာကြေးအိုး ဖွဗွတ်တွင် ဓာတ်ပုံရိုက် သက်သေပြုထားသည်။
ပီကင်း ဂျက်မ တဲ့
ပီကင်း ဂျက် တော့ မကြိုက်။
ပီကင်း ဘဲတော့ လာထားးးး
ဟီ ဟိ ဒါဇင်ပလပ်စ်တွေကို ဒဲ့ဆော်ပြီ ၊ မခံကြနဲ့….
ဝုတ်ဒယ် .. ဝုတ်ဒယ် ..
အိုက်ဒါ ဒဲ့ဆော်ဒါဘဲ …
မခံနဲ့ ပြန်ချဂျ …
ပီးဒေါ့ .. ဒါ .. ကြောင် ကြောင်ချင်း လက်တစ်လုံးဂျား ကပ်ဖဲ့တွားဒါ …
လိုအပ်ယင် ခေါ်လိုက်အုံး ..
ဒို့အရေး ဝင်အော်ပေးမယ် …. ခွိခွိ
ကြောင်သဒင်းဇင်မှာ ဒါဇင်ပလပ်စ်ပါ ပါလာပဟဲ့..